China Metal Ukunyathela mveliso kunye nabenzi | Khokela
Inkonzo yokunyathela i-Wuxi Lead idibanisa amava abenzi bezixhobo zethu kunye nokuzinikela kwethu kumgangatho wokuvelisa izinto ezihlangabezana ngokuthembekileyo nomgangatho wabathengi bethu. Sebenzisa izixhobo eziqhubela phambili kunye nezixhobo eziziisekondari ukuvelisa iindawo ezincinci nezikhulu
Inkonzo yokunyathela i-Wuxi Lead idibanisa amava abenzi bezixhobo zethu kunye nokuzinikela kwethu kumgangatho wokuvelisa izinto ezihlangabezana ngokuthembekileyo nomgangatho wabathengi bethu. Sebenzisa izixhobo eziqhubela phambili kunye nezixhobo eziziisekondari ukuvelisa iindawo ezincinci nezinkulu, siyakwazi ukubonelela ngotshintsho olukhawulezileyo kwiiprototypes kunye nemveliso ebalekayo.
Ukunyathela isinyithi yinkqubo yokuvelisa esetyenziselwa ukuguqula amaphepha esinyithi asicaba abe ziimilo ezithile. Yinkqubo entsonkothileyo enokubandakanya iindlela ezininzi zokwenza isinyithi-ukungabinanto, ukubetha, ukugoba kunye nokugqobhoza, ukubala nje ezimbalwa.
Ukunyathela isinyithi yinkqubo ebandayo eyenza ukusetyenziswa koomatshini bokufa kunye nokunyathela ukuguqula isinyithi sibe ziimilo ezahlukeneyo. Iziqwenga zesinyithi sephepha elisicaba, ekubhekiswa kuzo njengezinto ezingenanto, zinikwa iphepha lokunyathela isinyithi esisebenzisa isixhobo kwaye sife umphezulu ukwenza isinyithi sibe yimilo entsha. Izixhobo zokuvelisa kunye nabenzi besinyithi ababonelela ngeenkonzo zokunyathela babeka izinto ezinokufakwa isitampu phakathi kwamacandelo okusweleka, apho ukusetyenziswa kweemilo zoxinzelelo kunye nokucheba umbandela kwimilo yokugqibela oyifunayo yemveliso okanye yecandelo.
Sinikezela ngeenkonzo zokunyathela isinyithi ukuhambisa izixhobo kumashishini ezithuthi, i-aerospace, unyango kunye nezinye iimarike. Njengoko iimarike zehlabathi ziguquka, kukho isidingo esandayo sokuveliswa ngokukhawuleza kwamanani amakhulu ezinto ezinzima.
Ukunyathela isinyithi sisisombululo esikhawulezayo kunye neendleko ezifanelekileyo kwesi sidingo sokwenza ubungakanani obukhulu. Abavelisi abafuna izixhobo zensimbi ezinesitampu seprojekthi ngokubanzi bajonge iimpawu ezintathu ezibalulekileyo:
I-Aluminium, isinyithi, intsimbi engenasici, ubhedu, ubhedu, isinyithi sekhabhoni, njl
Ukusuka kwisiqwenga esinye seeprototypes ukuya kumthamo kwishumi lezigidi zamaqhekeza ngonyaka.
CNC machining, CNC yokugaya, Ukujika kwe-CNC, Iphepha lesinyithi, Kugqityiwe, Izixhobo, njl
Okulandelayo: Iphepha lesinyithi